अझै उठेनन् नेपाल-भारत सीमा स्तम्भ- फोटोफिचर - कान्तिपुर समाचार
श्रावण ३२, २०७६ मनोज पौडेल
कपिलवस्तु — एक महिनाअघि लढेका सीमास्तम्भ अझै उठन सकेका छैनन् । कपिलवस्तुको सुदुर पश्चिमको सीमा छुट्याउँदै बगेको दुई खोलामा ५ सीमा स्तम्भ लडेका छन् । एउटाको टुप्पो भच्चिएकोछ । असार २८ गते खोलामा आएको बाढीले सीमा स्तम्भ क्षतिग्रस्त बनेका थिए । महिना बढी भइसक्दा पनि सीमा स्तम्भ मर्मतसम्भार हुन सकेको छैन ।
विजयनगर गाउँपालिका-५ ठकुरापुर र भारतको बलरामपुर जिल्ला प्रतापपुरको सीमामा रहेका पिलर नं. ५७८/७ र ५७८/१० ढलेका छन् । त्यस्तै ७ नम्बर वडाको गेडुवाजोत र प्रतापपुरको सीमा रहेको पिलर नं. ५७७/७ र ५७७/९ ढलेका छन् ।
उक्त पिलर जहाँ गाडिएका थिए त्यही लडेको ठकुरापुर प्रहरी चौकीका प्रहरी जवान परशुराम यादवले बताए । पिलर नं. ५७८/७ र र ५७८/१० पानी बाहिर देखिएको छ । ५७७/९ पिलरको टुप्पो मात्र देखिन्छ ।
बालुवाले पुरिएको छ । पिलर नं. ५७७/७ लाई पानीले डुबाएकोछ । त्यस्तै विजयनगर गाउँपालिका-१ चमरका जंगलमा २ वटा सीमा स्तम्भ क्षति भएकोछ । उनीहरुको नम्बर भने थाह हुन सकेको छैन् ।
वनको सव डिभिजन कार्यालय गुगौलीको गस्ती टोलीले साता अघि क्षति भएको सीमा स्तम्भ फेला पारेको थियो । अर्रा खोलामा आएको बाढीले एउटा सीमा स्तम्भ पुरेको छ । अर्कोको टुप्पो भाच्चिएकोछ । ‘पानी वहाव र बाढीका कारण सीमा स्तम्भहरु सर्दैछन्,' ठकुरापुरका रामबहादुर थापाले भने, ‘सक्दो छिटो बनाउनु पर्छ ।’ नभए यही समस्याले सीमा विवाद हुन सक्ने उनले बताए ।
सीमा स्तम्भ रेखदेख गर्ने जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख उपरिक्षक जनक पुरीले भने आफू नयाँ आएकाले बुझ्ने क्रममा रहेको बताए । बुझेर थप जानकारी दिने उनले बताए । 'गृहमा जानकारी गराइसकेका छौं,' प्रजिअ गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भने, 'बर्खापछि मर्मत होला जस्तो छ ।'
प्रकाशित : श्रावण ३२, २०७६ १३:३२
काठमाडौँ — अभिनेत्री सुभद्रा अधिकारीको निधन भएको छ । उनको ७२ वर्षको उमेरमा डल्लुस्थित आफ्नै निवासमा शनिबार बिहान निधन भएको हो ।
अधिकारी लामोसमयदेखि दमबाट पीडित थिइन् । उनको पार्थिव शरीर दिउँसो साढे १२ बजेसम्म डल्लुस्थित निवासमै राखिने र त्यसपछि ‍अन्त्येष्टिका गरिने चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईले जानकारी दिए ।
उनले २०७३ सालको चलचित्र दीर्घ साधाना सम्मान पाएकी थिइन् । तीन वर्षदेखि रोकिएको उक्त सम्मान अधिकारीलाई केही दिनअघि मात्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रदान गरिएको थियो ।
अभिनेत्री अधिकारीले विभिन्न नाटक र चलचित्रमा अभिनय गरेकी थिइन् ।
प्रकाशित : श्रावण ३२, २०७६ १२:१६